China 99.9% min, 7.5+/-0.5kg/pc REACH certified Magnesium Ingot တရုတ် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |Fitech
99.9% မိနစ်၊ 7.5+/-0.5kg/pc REACH အသိအမှတ်ပြု မဂ္ဂနီစီယမ် သွင်းအား တရုတ်
အလွိုင်း သို့မဟုတ် မဟုတ်-အလွိုင်းမဟုတ်သော
အလယ်တန်း သို့မဟုတ် မဟုတ်-အလယ်တန်းမဟုတ်သော
အရွယ်အစား(5-7)cm * (5.5-7.5)cm * 3.5cm
Supply နိုင်ခြင်း:တစ်လလျှင် 10000 တန်/တန် တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် 100000
1.Molecular ဖော်မြူလာ- မီလီဂရမ်
2.Properties : ငွေဖြူ။
3. ယူနစ်အလေးချိန်: 7.5kg±0.5kg
4. သိုလှောင်မှု- အထုပ်ကို အလုံပိတ်၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး တင်ဆောင်ပြီး ထုပ်ပိုးထားရမည်ဖြစ်ပြီး အစိုဓာတ်ခံကာ ရေစိုခံကာ အေးမြခြောက်သွေ့ကာ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ဂိုဒေါင်တွင် သိမ်းဆည်းထားရမည်။
မဂ္ဂနီဆီယမ်သည် လက်ရှိနည်းပညာမြင့်နယ်ပယ်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သတ္တုမဟုတ်သောအမှုန့်ဖြစ်ပြီး လေကြောင်း၊ အာကာသယာဉ်၊ မော်တော်ကား၊ ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါး၊ သတ္တုဗေဒနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအပြင် ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးနှင့် အာကာသယာဉ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ၎င်းကို မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းနှင့် မဂ္ဂနီဆီယမ်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင် အချို့သောသတ္တုစပ်များအတွက် အေးဂျင့်လျှော့ချခြင်းနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း အေးဂျင့်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် မဂ္ဂနီဆီယမ် Ingot
HS ကုဒ် 8104110000
REACH အသိအမှတ်ပြု ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပုံသဏ္ဍာန် Ingot, လှံတံ
1. မဂ္ဂနီဆီယမ်လောင်ကျွမ်းမှုမြင့်မားသောအပူချိန်သည် ပြင်ပအပန်းဖြေနေစဉ်အတွင်း အရေးပေါ်မီးများစတင်ရန်အတွက် အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။အခြားဆက်စပ်အသုံးပြုမှုများတွင် ဓာတ်မီးဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ မီးတောက်များ၊ မီးရှူးမီးပန်းများနှင့် မီးရှူးမီးပန်းပစ်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။
2. ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတွင် ဓါတ်ပုံအချပ်ပြားများ ပြုလုပ်ခြင်း။
3. အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစပ်မှုတွင် အသုံးဝင်သည့် Grignard ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အလှည့်များ သို့မဟုတ် ဖဲကြိုးပုံစံ။
4. သမားရိုးကျ တွန်းအားများနှင့် သံသတ္တုများတွင် nodular graphite ထုတ်လုပ်မှုတွင် ဖြည့်စွက်အေးဂျင့်အဖြစ်။5. ၎င်းတို့၏ဆားများမှ ယူရေနီယမ်နှင့် အခြားသတ္တုများ ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။6. မြေအောက်ကန်များ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ မြှုပ်နှံထားသော အဆောက်အဦများနှင့် ရေအပူပေးစက်များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း (galvanic) anode အဖြစ်။
ထုပ်ပိုးမှု : pallet ပါသော 1000kgs၊
20'ပေ ကွန်တိန်နာ ပါသော pallet 20 တန်
ထုပ်ပိုးမှု : pallet ပါသော 1250kgs၊
20'ပေ ကွန်တိန်နာ နှင့် pallet 25တန်
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံဖြစ်သည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နမူနာကို အခမဲ့ အခကြေးငွေဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်သော်လည်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခကို ပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါ။
မေး- သင့်ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကဘာလဲ။
A- ငွေပေးချေမှု <=1000USD၊ 100% ကြိုတင်။ငွေပေးချေမှု>=1000USD၊ 30% T/T ကြိုတင်၊ ပစ္စည်းမပို့မီ လက်ကျန်ငွေ။
ယခင်- အရည်အသွေးမြင့် အကောင်းဆုံး ပေါင်းသတ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူ - စက်ရုံမှ ပံ့ပိုးပေးသော သန့်စင်သော 3N 5N 6N ဆယ်လီနီယမ် ရိုက်ချက် - Fitech
နောက်တစ်ခု: အရည်အသွေးမြင့် 99.99% Bismuth Powder
99.9% min Magnesium Bean/Granule
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း ingot ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
အရည်အသွေးမြင့် ဂဟေဆက်ပစ္စည်း မဂ္ဂနီဆီယမ်မှုန့်
မဂ္ဂနီဆီယမ် Calcium Alloy 70/30 တရုတ်မှ
Magnesium bean Mg granule 3-6mm
အရည်အသွေးမြင့် ငွေဖြူ မဂ္ဂနီဆီယမ် အင်ဂို 100g/...